Horror – Channel Myanmar
Camera Obscura (2017) စိတ်​ကျ​ရောဂါ ခံစား​နေရတဲ့ Jack ဆိုတဲ့ လူငယ်​တစ်​​ယောက်​ဟာ အလုပ်​က​နေထွက်​လိုက်​ရပြီး​နောက်​ သူရဲ့အလုပ်​လက်​မဲ့ဖြစ်​​နေတဲ့ အ​ကြောင်း​ကြောင့်​ သူနဲ့ သူ့ချစ်​သူ​ကောင်​မ​လေးတို့၂​​ယောက်​ကြားမှာ ပဋိပခ​တွေစဖြစ်​ပါ​တော့တယ်​ ထိုအဆင်​မ​ပြေမှု​တွေကို​ကျော်​လွှားဖို့ ချစ်​သူ​ကောင်​မ​လေးက Jack ၀ါသနာပါတဲ့ ဓာတ်​ပုံရိုက်​လုပ်​ငန်းကို ဆက်​လုပ်​လို့ရ​အောင်​ ​ရှေး​ဟောင်းကင်​မရာတစ်​လုံးကို anniversary gift အ​နေနဲ့​ပေးဝယ်​​ပေးလိုက်​ပါ​တော့တယ် ​ ထိုကင်​မရာက အစက​တော့ အ​ကောင်းဖြစ်​​ပေမယ့်​ ​နောက်​ကျ​တော့ ရိုက်​သမျှမြင်​ကွင်းထဲမှာ အနိဌာရုံ​တွေ ​ပေါ်လာပါ​တော့တယ်​ ထိုအနိဌာရုံ မြင်​ကွင်း​တွေထဲ Jack ကိုယ်​တိုင်​ပါလာ​သောအခါ..... (ဘာသာပြန်သူ ကတော့ Aye Min Oo ပါ ) File Size : (650 MB) and (260 MB)Quality : Webdl720pRunning Time : 1hr 35minutesFormat : Mp4Genre : Mystery, ThrillerSubtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub)Translated ...
Raw (2016) အခုတကားကတော့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်ရောHorrorကားကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ပါအူယားစေမယ့်၂၀၁၇မတ်လထွက်ကားလေးလာပါပြီ။ ဂျက်စတင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာမွေးကတည်းနေအသားနဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့အတွက်သတ်သတ်လွတ်ပဲ စားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တမိသားစုလုံးသတ်သတ်လွတ်စားကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေအားလုံးဟာတိရိစ္ဆာန်ကုဆရာဝန်ကျောင်းရောက်တဲ့ပထမအပတ်တွင်းမှာပဲပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကြိုဆိုမှုကြောင့်ဂျက်စတင်တယောက်အသားကိုစစားလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီကနေစပြီးအသားစားချင်တဲ့အာသီသဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ နောက်တော့အခန်းဖော်အဆွယ်ကောင်းမှုနဲ့သူအသားညှပ်ပေါင်မုန့်စစားရင်း နောက်တော့အသားစိမ်းတွေကိုပါစမ်းစားကြည့်လာပါတော့တယ်။ ဒီလောက်နဲ့တင်ရပ်မသွားသေးပါဘူး။ တနေ့ကျောင်းမှာအရင်ကျောင်းတက်နှင့်တဲ့သူ့အစ်မဆီသွားရင်းမတော်တဆဖြစ်ပြီးသူ့အစ်မလက်ချောင်းပြတ်သွားပါတယ်။ ထိတ်ထိတ်ပြာပြာနဲ့ဖြစ်နေရင်းသူ့အစ်မလက်ကိုကိုက်မိပါတယ်တော့တယ်။ အဲဒီကနေစပြီးလူသားကိုပထမဆုံးစစားတော့တာပါပဲ။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့အူယားလာစေတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈+တွေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေပါတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့မကြည့်သင့်ပါဘူး။ ဆိုတော့ဂျက်စတင်တယောက်သူ့အာသီသကိုဆက်ထိန်းနိုင်မလား။ အဲဒီကနေတဆင့်သူ့မိသားစုနဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေသလဲ။ ဘာလျို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေသလဲ။သူ့အစ်မကရောသူ့ကိုကူညီပေးမှာလား။ ပိုဆိုးစေမှာလား။ ဘာတွေကွယ်ဝှက်ထားတာရှိမလဲဆိုတာကတော့ဇာတ်ကားလေးမှာဆက်လက်ရှုစားလိုက်ပါဦးဗျာ။ (ဇာတ်လမ်းအညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်ကတော့ Thura Zarni Aung ပါ ) File Size : (750 MB) and (300 MB) Quality : 720p Bluray Running Time : 1hr 39minutes Format : Mp4 Genre : Drama, Horror Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated By Thura Zarni Aung Encode By Thanhtike Zaw
IMDB: 7.1/10 15,266 votes
Out of the Dark(1995) 1995 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီး သေးထွက်မတတ်ရီ ရမဲ့ဟာသမင်းသားကြီး စတီဗင် ချောင် ရဲ့ ဟာသကားတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးက တော့ မစ္စတာလီ နဲ့သူ့ဇနီးတို့ဟာ တိုက်ခန်းအသစ်ငှားပြီးပြောင်းရွေ့နေထိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးတာတစ်ခုက တိုက်ခန်းမှာအဖွားကြီး ဟာသေဆုံးထားပြီး သူသေဆုံးမှုကို မကျေနပ်နိုင်ပဲ လိုက်လံ အပြစ်တင်နေပါတော့တယ် မစ္စတာလီ တို့ လင်မယားကို ဂျင်းထည့်ခံခဲ့ရပြီး အဖွားကြီးရဲ့ ခြောက်လန့်မှုကြောင့် မစ္စတာလီတို့ လင်မယားဟာ သည်းညည်းမခံနိုင်တော့ပဲ တိုက်ခန်းကလုံခြုံရေး နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဒီပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ အရင်က တိုက်ခန်းမှာ စိတ်နောက်နေတဲ့ ကောင်မလေး ကို ကုသပေးဖူးတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန် တစ်ဖြစ်လဲ စတီဗင်ချောင်ပါ ပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကဲ ဘယ်လို သောက်ပေါက်ကရတွေများလုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ တ၀ကြီး ကြည့်လိုက်ကြပါတော့ဗျာ :Pဘာသာပြန်ကတော့ ကိုကွန်ပိုက်ပါဗျ
Awaken the Shadowman (2017) အသက်​အလတ်​ပိုင်းအရွယ်​ရှိတဲ့လူငယ်​တစ်​​ယောက်​ အိမ်​နဲ့အဆင်​မ​ပြောဖြစ်​ပြီး အိမ်​က​နေထွက်​လာခဲ့ပြီး ကိုယ့်​​ခြေ​ထောက်​​ပေါ်ကိုယ်​ရပ်​တည်​ခဲ့တယ် ထိုလူအရွယ်​​ရောက်​ အိမ်​​ထောင်​ရပ်​သားကျပြီး​ မိသားစု ​ပျော်​​ပျော်​ရွှင်​​ရွှင်​​နေထိုင်​​နေချိန်​မှာ ညီဖြစ်​သူဆီက ဖုန်းလာပြီး အ​မေဖြစ်​သူ​ပျောက်​​နေတယ်​ဆိုတဲ့သတင်းကို ကြားလိုက်​ရ​တော့ အ​မေရှိတဲ့မြို့ဆီသွားပြီး အ​မေဖြစ်​သူကို ရှာပါ​တော့တယ် အ​မေဖြစ်​သူကိုရှာ​ဖွေရင်း ထူးဆန်းတာ​တွေ တစ်​ခုပြီးတစ်​ခုဖြစ်​လာပါ​တော့တယ်​ သူတို့ရဲ့အ​မေဖြစ်​သူကို ရှာ​တွေနိုင်​ပါ့မလား အဖြစ်​ဆိုး​​တွေက​နေ လွတ်​​မြောက်​နိုင်​ပါ့မလား ဆိုတာက​တော့.... (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်က မကြီး Myint Thinzar ပါ) File Size : (600 MB) and (220MB) Quality : Webdl 720p Running Time : 1hr 23minutes Format : Mp4 Genre : Horror, Mystery, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hardsub) Translated By Myint Thinzar Encode By Thanhtike Zaw
Garo:Gold Storm Sho (2015 ) Garo GoldStorm Sho ( 2015 )ဒီဂျပန်Movieကားလေးကတော့ MyDramaListမှာ Rating 7.8/10 ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရောင်သူရဲကောင်းလက်ရှိမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Doigai Ryuugaရဲ့ 2013က " The One to Shine Light into the Darkness " ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးဆုံးတဲ့နောက်မှာ နောက်ထပ်ထွက်ရှိလာမယ့် ဒုတ်ယမြောက် " Garo- Goldstorm " Seriesအတွက် အစပျိုးထားပေးတဲ့ Movieလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ မြုပ်ကွက်တွေနဲ့အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ Series တွေကိုတော့ အချိန်ရလို့အဆင်ပြေရင် တင်ဆက်ပါဦးမယ်။ အခု ဒီMovieလေးကတော့ ရှေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ဒီGaroမျိုးဆက်ရဲ့ Series ကို မကြည့်ပေမယ့် နားလည်နိုင်လောက်တဲ့အတွက် ဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်ရတာပါ။ ဒီMovieရဲ့ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ... တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ Horrorတွေကို ရှင်းလင်းပေးပြီးလူသားတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ရွှေရောင်သူရဲကောင်း Dougai Ryuugaဟာ Vol City မှာရှိတဲ့ Horrorအားလုံးကိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာ ခရီးဆက်ဖို့အတွက် လာတဲ့လမ်းမှာ မာကိုင်းဆရာမလေးRianကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Volcityရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန် Horrorတွေဖြစ်တဲ့ Muradoနဲ့သူတပည့်တွေကို Rianနဲ့အတူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်... အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Ryuuga ဟာသူ့ရွှေထည်ဝတ်စုံမှာလွှမ်းမိုးစပြုလာပြီဖြစ်တဲ့ ...
The Covenant (2006) ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ witch ကားလေးပါ အစ်ဝစ်ခ်ျမြို့မှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ ကောင်လေး ၄ ယောက်ရှိပါတယ် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေးယောက်ကို အစ်ဝစ်ခ်ျရဲ့သားတွေလို့သိကြပါတယ် သူတို့လေးယောက်ဟာ ၁၇ ရာစုက witch တွေကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ မှော်ပညာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတွေပါ သူတို့ ၁၈ နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့စွမ်းအားတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်းခံရပါတယ် သိပ်မကြာခင်သူတို့ကျောင်းကို ပဉ္စမမြောက်မိသားစုက ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာတော့ ကြည့်ရှုကြပါဦးနော် Magic တို့ သဘာဝလွန်တို့ ကြိုက်တတ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတွေလည်းပါလို့ အားပေးကြပါဦးလို့ (ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုကျော်ကျော်ပါ) File Size : (600 MB) and (320 MB) Quality : Bluray 720p Running Time : 1hr 37minutes Format : Mp4 Genre : Action, Fantasy, Horror Translated By ကျော်ကျော် (CU - Mdy) Encode By ...
IMDB: 5.3/10 41,136 votes
Hush (2016) မက်ဒီ ဟာ တောစပ်ကိုစာရေးဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ် တောစပ်ဆိုပေမဲ့ အိမ်လေးတွေတော့ရှိပါတယ် အလှမ်းတော့ဝေးတာပေါ့ အိုကေ ဆက်ရအောင် အံဩစရာကောင်းတာက မက်ဒီဟာ ဆွံ့အနားမကြားသူ တစ်ယောက်ပါ သူစာရေးလို့ စာမူခရတာတွေကိုလည်း နားထိုင်းစောင့်ရှောက်ရေး ဝက်ဆိုဒ်အတွက် ကူညီပေးပါတယ်... "She is alone.... But She is not alone.... သူ့အတွက် ကံကြမ္မာဆိုးတွေစတင်ဝင်ရောက်လာပါပြီ သူ့ဆီကိုဖ်ိတ်မခေါ်ပဲရောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်.... သူ့အသက်ကိုတစ်စစီခြွေမဲ့သူ...... အကူအညီအော်တောင်းလည်းမရနိုင် ...ပြေးလည်းမလွှတ်... မက်ဒီဟာ ထိုသူလက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်နေမလား.... ဒါမှမဟုတ်.... ဖိတ်မခေါ်ပဲရောက်လာတဲ့သူကိုမက်ဒီက ပြန်မလာနိုင်တဲ့လမ်းကိုပို့ပေးမလား..... လူတွေက သေခြင်းတရားနဲ့နီးကပ်လာရင် ဘယ်လ်ိုတွေဖြစ်တက်ကြတာလဲ ပြင်းထန်တဲ့အခက်အခဲတွေကြုံလာတိုင်း အလျှော့မပေးပဲ အဖြေကိုရအောင်ရှာပါတဲ့..... ဒီကားကတော့ အင်းအားကြီးသူနဲ့ အားနည်းသူတို့ ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပွဲပဲလို့ပြောရတော့မှာပဲ ...
IMDB: 6.6/10 48,250 votes
The Collector (2009) Desperate to repay his debt to his ex-wife, an ex-con plotsaheist at his new employer's country home, unaware thatasecond criminal has also targeted the property, and rigged it withaseries of deadly traps.ကြောက်မက်ဖွယ်ရာလူသတ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ချေ့စ်မိသားစုဟာဆိုရင် ဒက်ထရွိုက် မှာရှိတဲ့ အိမ်တစ်လုံးကို ပြောင်းရွှေ့ကျပါတယ်။ဒီလို ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင် အာကင်ဆိုတဲ့ လူကို တံခါးပေါက် ပြတင်းပေါက်တွက် တပ်ဆင် ပေးဖို့အတွက်ငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်။အာကင်ရဲ့ အမျိုးသမီးဟာဆိုရင် အကြွေးတွေ နစ်နေပြီး ငွေကို အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။အာကင် ရဲ့ လုပ်ခကလည်း အကြွေးပေးရအောင် မလုံလောက်ပြန်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာ ကြံရာမရတဲ့အဆုံး အာကင်ဟာ ချေ့စ်မိသားစုရဲ့ မီးခံသေတ္တာကို ဖောက်ထွင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အစီအစဉ်ချ ...
Vampire Cleanup Department (2017) ဟောင်ကောင်မှာ နေထိုင်ကျက်စားနေတဲ့ သွေး စုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကို နှိမ်နင်းတဲ့အဖွဲ့အကြောင်း ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဟာ ဟောင်ကောင်မှာ ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒါတွေကို အဓိကနှိမ်နင်းတဲ့ ဗီစီဒီ (Vampire Cleanup Department)လို့ခေါ်တဲ့ ဌာနတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ဟာ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်မှာ တံမြက်စည်းလှည်းတဲ့ အဖွဲ့အနေနဲ့ ထွက်လာပြီး လမ်းမှာတွေ့သမျှ သွေးစုပ်ကောင်တွေကိုဖမ်းပြီး အမှိုက်ပုံးကြီးထဲထည့်ကာ သိမ်းဆည်းနှိမ်နင်းပစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ တင်မ်ချန်းဟာ သွေးစုပ်ကောင်တစ်ကောင်နဲ့ဆုံပြီး အသတ်ခံရလုဆဲဆဲမှာ ဗီစီဒီအဖွဲ့က အချိန်မီကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ တင်မ်မှာ သွေးစုပ်ကောင်တွေရဲ့ အဆိပ်ကို တွန်းကန်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားရှိနေ တယ်ဆိုတာ ဗီစီဒီအဖွဲ့ရဲ့ အကြံပေးအန်ကယ်ချန်က သတိထားမိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဗီစီဒီအဖွဲ့က ကပ္ပတိန်ချူ၊ သရဲဆရာဂျင်ဂျာ၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအမ်၊ လက်နက်ကျွမ်းကျင်သူ ကွေတို့ကို တင်မ်ရဲ့အကြောင်း ပြောပြပြီး ဗီစီဒီအဖွဲ့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်အဖြစ် ပါဝင်စေဖို့ အန်ကယ်ချန်က အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တင်မ်တစ်ယောက် ဗန်ပိုင်းယားဖမ်းတဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပထမဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာ အလွဲတွေကြုံရသလို သနားစရာ ဗန်ပိုင်းယားမလေး ဆန်းမားနဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဆန်းမားဟာ ...
Big Fortune Hotel (2015) တရုတ် ပာာသ သရဲကားပါ ၂၀၁၅ လောက်ကထွက်ခဲ့တာပါ ဇာတ်ကားကပုံစံကတော့ မလေးရှားမှာ ကောင်လေးတယောက်လှည့်လည်ရင်းနဲ့ ဆီဒစ် ဆိုတဲ့သရဲမလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဆီဒစ် ဆိုတဲ့သရဲမချောလေးပာာဆိုရင်ဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၃၀ က အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ လက်စားချေလိုသေးတာကြောင့် သရဲမဖြစ်နေသေးတာပါ ကောင်လေးနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေအကူအညီနဲ့ ဆီဒစ်သူ့ကိုသတ်တဲ့တရားခံကိုရှာတွေ့သွားနိုင်မလား? မျက်စိရှေ့မှာမြင်တာအားလုံးကရော အမှန်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? အမှုကိုဖော်သွားရင်း ဇာတ်ကားကို မပျင်းရအောင် ဟာသလေးတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတာပါ သရဲမလေးကလည်းအရမ်းချောတော့ ကြည့်ရတာပိုမိုက်တာပေါ့ဗျာ ပင်ပန်းနေတဲ့နေ့လေးမှာ ဟာသကားလေးကြည့်ပြီး အပန်းဖြေလိုက်ပါ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်ကတော့ ကွီးငြိမ်းချမ်းထက် ပါ) File Size : 700 MB/300 MB Quality : Bluray720p Running Time : 1hr 28minutes Format : Mp4 Genre : Action, Horror, Comedy Translator : Nyein Chan Htet Encoder :Thanhtike Zaw
Bhool Bhulaiyaa (2007) ကဲဗြာအညှနျးမလာခငျ မငျးသားမငျးသမီးအရငျပွောမယျ�Bollywood မှာလိုငျးစုံရတဲ့မငျးသား Ashay Kumar ကဟာသမငျးသားပေါ့� မငျးသမီးကတော့ Kaho Naa Pyar Hai(လကျပှားမငျးသား ခေါငျးဆောငျမငျးသားလုပျခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးကား) ထဲက မငျးသမီးခြောလေး Ameesha Petal လေးပေါ့…သူကတော့ဒီကားထဲမှာ အိန်ဒွရှေငျလေး..ခဈြဖို့စှနျးကောငျးတယျ �ဇာတျလမျးအကဉျြး…နညျးနညျးပဲပွောပွမယျ…အကုနျပွောပွရငျ ကွညျ့ရတာ feel မလာတော့ဘူး… ဇာတျလမျးလေးက ဘာသာတရားနဲ့စိတျပညာကိုအခွခေံထားတာပါ စိတျပညာဆိုအရူးလို့ထငျမှာပေါ့… ထငျနရေငျမှားမယျ…တနျဖိုးရှိတဲ့အသိပညာဗဟုသုတတှရေမှာပါ… သရဲခွောကျတဲ့နနျးတျောထဲမှာ စိတျရောဂါဝဒေနာရှငျလေးအပွငျ သရဲကိုပါ ဆရာဝနျကဘယျလိုပညာသားပါပါ ဘာသာရေးအကူအညီလေးနဲ့ကုသှားမယျဆိုတာ သိခငျြစိတျတပွငျးပွငျးနဲ့ကွညျ့ရှုရမှာပါ… အစပိုငျးမှာလညျးဟာသလေးတှနေဲ့ပါ…ဇာတျလမျးတဈဝကျဆို သိတဲ့အတိုငျး climax ရောကျပွီ… �Ashay Kumar ရဲ့ပညာသားပါပါဟာသနှောပွီးရိုကျထားတာ ဘယျလောကျကောငျးလဲတှရေ့မှာပါ. သီခငျြးကောငျးလေးတှကေိုလညျး ဘာသာပွနျပေးထားပါတယျ…လုံးဝဂန်တဝငျပါပဲ.. �ဟာသကွိုကျတဲ့သူ အသညျးနုတဲ့သူ(ကွညျ့နရေငျးသရဲကိုသနားလို့ငိုပါငိုစရေမယျ) စိတျပညာကိုအထငျသေးတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ Must See ပါ.. ဒီလောကျပါပဲ…ကနျြတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာခံစားပါ (ဘာသာပွနျသူကတော့ Khant Shwe Thaik ပါ) ------------------------------------------------------------- ကဲဗျာအညွန်းမလာခင်​ မင်းသားမင်းသမီးအရင်​​ပြောမယ်​�Bollywood မှာလိုင်းစုံရတဲ့မင်းသား Ashay Kumar ကဟာသမင်းသား​ပေါ့� မင်းသမီးက​တော့ Kaho Naa Pyar Hai(လက်​ပွားမင်းသား ခေါင်းေ​​ဆာင်မင်းသားလုပ်ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးကား) ထဲက မင်းသမီး​ချော​လေး Ameesha Petal ​လေး​ပေါ့…သူက​တော့ဒီကားထဲမှာ အိ​နြေ္ဒရှင်​​လေး..ချစ်​ဖို့စွန်း​ကောင်းတယ်​ �ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း…နည်းနည်းပဲ​ပြောပြမယ်​…အကုန်​​ပြောပြရင်​ ကြည့်​ရတာ feel မလာ​တော့ဘူး… ဇာတ်​လမ်း​လေးက ဘာသာတရားနဲ့စိတ်​​ပညာကိုအ​ခြေခံထားတာပါ ...
IMDB: 7.3/10 20,504 votes
Life (2017) သိပံရုပျရှငျတှကွေိုကျတဲ့ပရိတျသတျတှအေတှကျတော့ခံစားမှုအသဈပေးမယျ့ဇာတျကားကောငျးလေးပါ။ယခုနှဈ၂၀၁၇မတျ၂၄ကမှထုတျလိုကျတဲ့ကားသဈလေးဖွဈပါတယျ။အမွငျတမြိုးနဲ့ကွညျ့ရတာကောငျးတဲ့ကားလေးတကားဖွဈပါတယျ။နိုငျငံပေါငျးစုံကအာကာသပညာရှငျတစုဟာနိုငျငံတကအာကာသစခနျးမှာအတူတူအင်ျဂါဂွိုလျကိုလလေ့ာရငျးအလုပျလုပျနကွေတာပါ။သမိုငျးမှာအရေးကွီးတဲ့ရှာဖှမှေုဖွဈတဲ့ကမ်ဘာအပွငျတခွားဘယျနရောတှမှောသကျရှိတှရှေိလဲဆိုတာကိုရှာဖှလေလေ့ာနကွေတာပါ။ကံကောငျးစှာပဲအင်ျဂါဂွိုလျကယူလာတဲ့မွနေမူနာတှကေိုစမျးသပျလိုကျတဲ့အခါသကျရှိဖွဈလာမယျ့ကလပျစညျးလေးကိုတှရှေိ့သှားပါတယျတှရှေိ့မှုအတှကျအားလုံးဝမျးသာဝမျးမွောကျဖွဈကွရပွီးနိုငျငံတကာကပါအားပေးခဲ့ကွပါတယျ။ဒါပမေယျ့ရုတျတရတျပဲမတျောတဆအမှားတခုဖွဈသှားပွီးတဲ့နောကျမှာတော့အဲဒီသကျရှိမြိုးစိတျလေးကလှုပျရှားမှုမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပမေယျ့လူသားပပေဲ။မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာကိုဖွဈအောငျလုပျတတျတာလဲလူသားတှပေါပဲ။အဲဒီဖွဈလာတဲ့အကြိုးဆကျကိုခံစားရတာလဲလူပါပဲ။အဲလိုပဲကယျဗငျလို့သူတို့နာမညျပေးထာတဲ့အင်ျဂါဂွိုလျကသကျရှိလေးကိုပွနျလညျအသကျသှငျးပွီးမူလအခွအေနနေဲ့မတူပဲထူးဆနျးစှာပွုမှုနတေဲ့အခါမှာတော့အာကာသပညာရှငျကွီးတှဘေယျလိုလုပျကွမလဲ။အဲဒီကယျဗငျလေးကရောဘယျလိုတှကေံမကောငျးမှုတှယေူလာမလဲ။သူ့ရနျကနအောကာသပညာရှငျတှကောကှယျနိုငျမှာလား။ကမ်ဘာကွီးကိုကယျတငျမယျဆိုတဲ့သူတို့ဆန်ဒတှပွေညျ့ဝမလားဆိုတာတော့ဇာတျကားလေးမှာဆကျကွညျ့လိုကျပါဦးဗြာ။စိတျလှုပျရှားမှုတှပေေးမှာဖွဈပွီးတကယျကွညျ့ကောငျးစမေယျ့ကားလေးပါ။ဇာတျကားနောကျပိုငျးရောကျလပေိုပွီးစိတျလှုပျရှားရလပေါပဲ။ရုံဝငျငှေ၉၃.၅သနျးထိဝငျခဲ့တဲ့ကားလေးလညျးဖွဈပါတယျ။အားလပျခြိနျကိုစိတျအပနျးပွစေေ၊စိတျကနြေပျစမေယျ့ကားလေးဖွဈပါတယျ။(ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ.ဘာသာပွနျသူကတော့ Fridays ပဲဖွဈပါတယျ)----------------------------------------------------------သိပံရုပ်ရှင်တွေကြိုက်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့ခံစားမှုအသစ်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။ယခုနှစ်၂၀၁၇မတ်၂၄ကမှထုတ်လိုက်တဲ့ကားသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အမြင်တမျိုးနဲ့ကြည့်ရတာကောင်းတဲ့ကားလေးတကားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံကအာကာသပညာရှင်တစုဟာနိုင်ငံတကအာကာသစခန်းမှာအတူတူအင်္ဂါဂြိုလ်ကိုလေ့လာရင်းအလုပ်လုပ်နေကြတာပါ။သမိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ရှာဖွေမှုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာအပြင်တခြားဘယ်နေရာတွေမှာသက်ရှိတွေရှိလဲဆိုတာကိုရှာဖွေလေ့လာနေကြတာပါ။ကံကောင်းစွာပဲအင်္ဂါဂြိုလ်ကယူလာတဲ့မြေနမူနာတွေကိုစမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါသက်ရှိဖြစ်လာမယ့်ကလပ်စည်းလေးကိုတွေ့ရှိသွားပါတယ်တွေ့ရှိမှုအတွက်အားလုံးဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဖြစ်ကြရပြီးနိုင်ငံတကာကပါအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်ရုတ်တရတ်ပဲမတော်တဆအမှားတခုဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲဒီသက်ရှိမျိုးစိတ်လေးကလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမယ့်လူသားပေပဲ။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တာလဲလူသားတွေပါပဲ။အဲဒီဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာလဲလူပါပဲ။အဲလိုပဲကယ်ဗင်လို့သူတို့နာမည်ပေးထာတဲ့အင်္ဂါဂြိုလ်ကသက်ရှိလေးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပြီးမူလအခြေအနေနဲ့မတူပဲထူးဆန်းစွာပြုမှုနေတဲ့အခါမှာတော့အာကာသပညာရှင်ကြီးတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အဲဒီကယ်ဗင်လေးကရောဘယ်လိုတွေကံမကောင်းမှုတွေယူလာမလဲ။သူ့ရန်ကနေအာကာသပညာရှင်တွေကာကွယ်နိုင်မှာလား။ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့သူတို့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝမလားဆိုတာတော့ဇာတ်ကားလေးမှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပေးမှာဖြစ်ပြီးတကယ်ကြည့်ကောင်းစေမယ့်ကားလေးပါ။ဇာတ်ကားနောက်ပိုင်းရောက်လေပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရလေပါပဲ။ရုံဝင်ငွေ၉၃.၅သန်းထိဝင်ခဲ့တဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလပ်ချိန်ကိုစိတ်အပန်းပြေစေ၊စိတ်ကျေနပ်စေမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော့ Fridays ပဲဖြစ်ပါတယ်)File Size : 751 MB Quality : Bluray 720p Running Time : 1hr 44minutes Format : Mp4 Genre : Horror, Sci-Fi, Thriller Translator : Fridays Encoder :Thanhtike Zaw
IMDB: 6.6/10 198,069 votes
Pandorum (2009) ၂၁၇၄ ခုနှစ် မှာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သဘာဝ ရင်းမြစ်တွေ ဟာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး လူသားတွေနေထိုင်ဖို့ နေရာမလုံလောက်တော့ပါဘူး။လူသားတွေဟာ အခြေချစရာ အိမ် အသစ် ကိုရှာဖွေ ရတော့တာပေါ့။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် လူသားတွေဟာ Tanis ဂြိုလ်ဆီကို အာကသယာဉ်တစ်စီးကို လွှတ်ပြီး နေထိုင်ဖို့ အဆင်ပြေမပြေ လေ့လာပါတော့တယ်။လူသားတွေရဲ့ နောက်ဆုံး မျှော်လင့်ချက် လေးတစ်ခုပေါ့။ဒီလို သွားတဲ့အခါ ခရီးက ဝေးကွာလွန်းတဲ့အတွက် hyper-sleep လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ အိပ်စက်စေပြီး ခရီးသွားခိုင်းပါတယ်။ခရီးသွားနေစဉ်မှာပဲ တပ်ကြပ် ဘောင်ဝါရဲ့ အခန်းဟာ စက်ချို့ယွင်းမှု့ဖြစ်ပြီး တပ်ကြပ်ဘောင်ဝါ တစ်ယောက် နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကြာမြင့်စွာအိပ်စက်မှု့ကြောင့် သူဟာ ဝေခွဲမရဖြစ်ပြီး မှတ်ဥာဏ်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။မကြာခင်မှာ သူသိလာတာက ဓာတ်ပေါင်းဖို ချို့ယွင်းမှု့ဖြစ်နေပြီး စွမ်းအင် အရမ်းကို တိုးလွန်းနေပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ တစ်ခြားသူတွေ အသီးသီး နိုးထလာခဲ့ ပါတယ်။သူတို့ဟာလည်း အသီးသီး မှတ်ဥာဏ်ပျောက်ဆုံးပြီး ဘာကိုမှမှတ် မိကျတော့ပါဘူး မကြာခင် သူတို့ထပ်မံ သိလာရတာက အန္တရာယ် ရှိတဲ့ တခြားသတ္တ၀ါတွေ ယာဉ်ထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ …. သူတို့ အသက် ကို ကယ်တင်ဖို့ တစ်ခုထဲသောနည်းက ...
Sweet Home (2015) အယ်လီဟာ သူ့ချစ်သူကိုမွေးနေ့ပွဲလုပ်ပေးဖို့အတွက် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှါးထားခဲ့ပါတယ် အဲဒီညမှာပဲ အကြောင်းကြောင့် အဲဒီအဆောက်အဦးမှာပဲနေတဲ့ အဖိုးကြီးကိုသတ်ဖို့ရောက်လာတဲ့ လူတစ်စုရောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ် ထိုလူတစ်စုဟာ အဖိုးကြီးကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းအပြီးမှာ မတော်တဆ အယ်လီတို့ချစ်သူနှစ်ဦးနဲ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာ.... မမျှော်လင့်ရဲတဲ့ဆိုးကျိုးတွေအယ်လီတို့တီပြေးလာခဲ့ပါပြီ ပြေးလမ်းမရှိတဲ့တိုက်ကြီးထဲမှာ အယ်လီတစ်ယောက် ဘယ်လိုတော်လှန်မှာလဲ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားပြီးကြည့်ရဦးမှာပါ(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော့ John La Yaung ပဲ ဖြစ်ပါတယ်)File Size : 650 MB / 200 MB Quality : Bluray 720P Running Time : 1hr 20minutes Format : Mp4 Genre : Horror Translator : John La Yaung Encoder :Thanhtike Zaw Download Here Yoteshin Link Download Here Bluray 720p (650 MB) Openload Link Download Small File Size ...
IMDB: 5.2/10 1487 votes
The Girl with All the Gifts (2016) ဒီကားလေးဟာ ၂၀၁၆ တုန်းကထွက်ထားပြီး rating 6.7 IMDb ရထားတဲ့ Horror ကားလေးပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရောဂါကပ်ဆိုးကြရောက်တဲ့အခါ ဖြေဆေးထုတ်ဖို့ စမ်းသပ်ခံရတဲ့ ကောင်မလေး မယ်လန်နီ နဲ့ သူ့ကိုစာသင်ပေးတဲ့ ဆရာမ ဂျက်စတင် တို့ကြားက သံယောဇဉ် ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့ ဘဝကို ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင် ရိုက်ထားတာပါ။ ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေကို ဆာလောင်သူတွေလို့ ခေါ်ကြတယ်... မြေအောက်ခမ်းထဲမှာ ပိတ်ထားပြီး စမ်းသပ်ခံရတဲ့ ကလေးတွေထဲမှာ မယ်လန်နီ ကအတော်ဆုံး ဥာဏ်အကောင်းဆုံးပါ။ ဥာဏ်ကောင်းလွန်းတဲ့ မယ်လန်နီလေးကို သူ့ဆရာမက သဘောကျပြီး ခေါင်းလေးကို သွားပုတ်မိလိုက်တယ်။ မယ်လန်နီကလည်း ဆာလောင်သူတွေထဲက တစ်ဦးပါပဲ။ သူတို့က လူအနံ့ရတာနဲ့ ရောဂါထတော့တာပါပဲ။ နောက်တော့ အပြင်မှာရှိတဲ့ ဆာလောင်သူတွေကြောင့် ကာထားတဲ့ခြံစည်းရိုး ပျက်စီးသွားတယ် မြေကျင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်ထွက်ပြေးရတယ်.. ဖြေဆေးထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဒေါက်တာ ကာဝယ် ဆရာမ တပ်ကြပ်ကြီးနဲ့ သူ့ရဲဘော်တွေ နဲ့ မယ်လန်နီ တို့ ကားထဲအတူပါသွားကြတယ်။ မယ်လန်နီ က ဆာလောင်သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုတာ မမေ့လိုက်နဲ့ဦးနော် ပရိတ်သတ်ကြီး။ ကဲ မယ်လန်နီ က ရောဂါထဖောက်ပြီးပဲ ...